अर्थ / वाणिज्य – Page 51 – Radiokathmandu अर्थ / वाणिज्य – Page 51 – Radiokathmandu
बुधबार सुनको मूल्य बढ्याे
८ असोज, काठमाडौं । बुधबार पनि सुनको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यावसायी महासंघले बुधबार प्रतितोला ६०० रुपैयाँले बढेको जनाएको छ। संघका अनुसार छापावाल सुन प्रतितोला ७२ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यसैगरी तेजाबीको मूल्य प्रतितोला…
डिजिटल लुट- कृषि विकास बैङ्ककाे १ करोड ५६ लाख रकम चोरी
८ असोज, काठमाडौं । चिनियाँ नागरिकको समूहले नेपाली बैंकको एटीएम ह्याक गरेर करिब दुई करोड रुपैयाँ लुटेको एक महिना बित्न नपाउँदै पुनः उस्तै प्रकृतिको घटना दोहोरिएको छ । यसले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको फितलो साइबर सुरक्षा प्रणालीलाई…
सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफरर ई–सेवा बिच रेमिटान्स कारोबार सुरु
७ असोज, काठमाडौं । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर र ई सेवा बिच रेमिटान्स कारोबार सुरु भएको छ । एक कार्यक्रमका बिच सिटी एक्सप्रेसका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र टण्डन र ई सेवाको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत…
मंगलबार सुनको भाउ बढ्याे
७ असोज, काठमाडाैं । मंगलबार सुनको भाउ तोलामा एक सय रुपैयाँ बढेको छ । सुन मंगलबार तोलाको ७१ हजार ४ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । आइतबार र सोमबार तोलाको ७१…
मंगलबार कुवेती दिनारको भाउ बढ्यो
७ असोज, काठमाडाैं। मंगलबार कुवेती दिनारको भाउ केही पैसाले बढेको छ । नेपाल राष्ट्रबैंकले कुवेती दिनार १ को खरिददर ३७२ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर ३७४ रुपैयाँ ७० पैसा तोकेको छ । हिजो खरिददर ३७२…
सय रुपैयाँको नयाँ नोट आजदेखि चल्तीमा आउने
७ असोज, काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैँकले सय रुपैयाँको नयाँ नोट मंगलबारदेखि चल्तीमा ल्याएको छ । बैंकले पहिलेकै आकार, प्रकार तथा रंगमा नयाँ विषेशतासहितको नयाँ नोट प्रचलनमा ल्याएको हो । नयाँ नोटमा बायाँतर्फ सगरमाथाको चित्र,…
श्री एयरलाइन्सले जेष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छूट दिने
६ असोज, काठमाडौं । निजी लगानीको वायुसेवा कम्पनी श्री एयरलाइन्सले ८५ वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकलाई ५ सय रुपैयाँ मात्र भाडामा सेवा दिने भएको छ । कम्पनीका अनुसार यो १२ असोज २०७६ बाट लागु हुने भएको…
सोमबार सुन ताेलाकाे कति ?
६ असोज, काठमाडौं । सोमबार सुन तोलामा ७१ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । हिजो पनि यहि मूल्यमा कारोबार भएको थियो । यस्तै, तेजावी सुन प्रतितोला ७१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन…
सोमबार विदेशी मुद्रा सटहि दर यस्ताे छ
६ असोज, काठमाडौं । सोमबार नेपाल राष्ट्रबैंकले साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ३४ पैसा तोकेको छ । हिजो पनि खरिददर ३० रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ…
उपत्यकाभित्र र बाहिर कहाँबाट साट्न सकिन्छ नयाँ नाेट ?
६ असोज, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले काठमाडौंसँगै देशका विभिन्न स्थानबाट नयाँ नोट वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । दशैंमा हुने नयाँ नोटको मागलाई मध्यनजर गर्दै असोज १० देखि १७ गतेसम्म ५, १०, २०, ५०…